Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley oo Cudhaadh (Hostage) U Haysta Dadka Ku Nool Magaalada – Noora Afgaab
Cabdi Iley oo Cudhaadh (Hostage) U Haysta Dadka Ku Nool Magaalada – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ June 26, 2014
Waxay isla qireen dadka ku nool magaalooyinka Ogadenya in dadka ugu amaanka badan maanta ay yihiin kuwa miyiga ku nool ee waliba ka agdhow aagagga ay joogaan ONLF. Cabdi Iley oo mashruuciisii ahaa waan soo tirtiray ONLF ay gadmi weyday ayaa hadda operation-adii (hawlgaladii) ay qaadi jireen usoo wareejiyay magaalooyinka gaar ahaan kuwa afaafka goobaha dagaalka saaran. Markasta oo ciidankiisa lagusoo jabiyo dagaal, sidii dhaqanka u ahaan jirtay Itobiyaanka ayay kula soo noqdaan magaalada, halkaasoo ay ka gaystaan waxaan la arag oon la maqlin. Waxaadna moodaa inay ugu muuqato dhaqanka noocaa ah ee lagu yaqiinay ciidanka Itobiya inuu ka dhigayo ciidan Itobiyaan ah.
Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaadhay magaalada Dhagaxbuur ayaa sheegay in ugu yaraan 120 qof lagu xidh xidhay maanta ilaa shalay maagaaladaa. Dadkan ayaa lala xidhiidhinayaa xadhigooda oo loogu magac bixinayaa dagaalkii maalinta dhaweyd ka dhacay magaalada agteeda, waxaana laga soo qab qabtay meelo kala duwan.
Sidoo kale ugu yaraan 20 qof oo kale ayaa lawaayey meel lageeyey inkasta oy warar sheegayaan in qaar kamid ah ladilay laguna dilay meelo ka baxsan magaalada Dhagaxbuur. Dadkan ayaa lasheegayaa in dhinaca Gunagado gaadhi loo saaray iyagoo maxaabiis ah. Xidhaygan iyo dilkan cusub ee faraha badan ayaa dhacay 3-da maalmood un, kadib markii uu Cabdi iley dib ugu soo magacaabay koomishinka booliska gobolka Dhagaxbuur ninka lagu magacaabo Cumar gambeele oo ahaa ninkii hada kahor isku haaystay komishinka Asluubta iyo kan Gobolka ee kala gaabiyey dadka reer Dhagaxbuur. Hada Cabdi iley ayaa marlabaad usoo xulay ninkan in uu soo gumaado shacabka halkaas dagan taasoo uu isna si adag u bilaabay islamarkiiba. Sidoo kale waxaa lasheegayaa in dad badan lagu xidh xidhay tuulooyinka hoose yimaada degmada Dhagaxbuur oo aay kamid tahay tuulada Garawo, Laasgalool, Bulaale, Sasabane iyo qaar kaloo badan.
Waxaa kaloo jira in; Xafiisyada degaanka ee heer kilil ayaa loo qaybiyey foom laga soo diray xafiiska maamulka DDSI oo ah xafiiska madaxweynaha. Foomkan ayaa waxaa lasocota warqad sheegaysa in laga soo buuxiyo dhamaan shaqaalah kadibna lasoo gudbiyo islamaanta. Foomkan ayaa waxaa kamid ah suaalaha ladoonayo in qofkasta oo shaqaala laga buuyiyo waxaan akmid ah; 1. qabiilkiisa guud iyo jilib hooseedkiisa 2. degmada uu kusoo jeedo ama qabiilkoodu dagan yahay 3. booska uu ku qoran yahay 4. dhinaca nabadgalyada wax uu kaqabtay hada kahor.
Hadaba inkasta oyna ahayn markii ugu horeysay ee shaqaalaha degaanka foom noocan ah laga buuxiyo hadana arintan ayaa waxaa hada lala xidhiidhinayaa inay salka kuhaayso shir maanta uu cabdi iley uqabtay gudida fulinta kililka kaas oo uu ku doonayo inay dhamaanba shaqaalaha iyo masuuliyiintu ubaxaan haawlo nabadgalyo oo ah degmooyinka iyo qabaleyada degaanka taas oo ku tusineysa culeeyska nabadgalyo darada degaanka kajirta ee aan laqarinkarin. Inkasta oo arintan haawlgalkan nabadgalyada lagu dabakhayo abaabul dadka loo abaabulayo arimaha doorashooyinka soo socda taas madaxa loo saarayo, laakiin xaqiiqdu waxay tahay in loo baxayo haawlgal nabadgalyo oo lagu maqnaan doono in mudo ah isagoo uu qof waliba abaabuli doona reerkooda iyo siday ula dagalamilahayeen ONLF. Sidoo kale Cabdi iley ayaa u isticmaalaya arintan in laga cabsado iyo inuu dadka iyo masuuliyiinta laga mashquuliyo intay isaga ku mashquuli lahaayeen maadama oo uu tagayo qiimeynta kililada oo ka dhicidoontaAddis ababa 20ka bishan SANE.